Roberto Carlos Oo Dib Ugu Soo Laabtay Garoomada Iyo Kooxda Uu Heshiiska La Galay - GOOL24.NET
Roberto Carlos Oo Dib Ugu Soo Laabtay Garoomada Iyo Kooxda Uu Heshiiska La Galay
Halyeygii Brazil ee Roberto Carlos ayaa dib ugu soo laabanaya garoomada isaga oo ay da’diisu tahay 48 jir, waxaana uu u ciyaari doonaa koox uu heshiis u saxeexay maanta oo uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoydu.
Roberto Carlos oo xulka Brazil kula guuleystay labadii Koob Adduun ee 1994kii iyo 2002 ayaa ka fadhiistay ciyaaraha sannadkii 2012kii kaddib 24 sannadood oo uu ciyaartoy ahaa wax walbana uu ku guuleystay.
Bishii July 2015 ayaa loo magacaabay inuu tababare iyo ciyaartoy ba kooxda Delhi Dynamos ee horyaalka waddanka India ee Indian Super League, taas oo uu usii ciyaaray saddex kulan isaga oo ciyaartoy iyo tababare ba isku ahy.
Real Madrid oo uu u ciyaaray intii ugu badnayd cimrigiisa ciyaareed ayuu la qaaday saddex Champions League, afar horyaalka LaLiga ah iyo koobab badan oo kale.
Xilli ay da’du hayso ayaa uu Roberto Carlos shaaciyey in uu dib ugu soo laabtay garoomada, waxaana uu heshiis u saxeexay kooxda Shrewsbury & District Sunday League ka dhisan ee Bull In The Barne United.
Ed Speller oo ah tababare iyo ciyaartoy kooxdan ah ayaa yidhi: “Roberto Carlos waa halyey iyo mid ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsanaa kubadda cagta, waa hanti.”